कोरोना कहरः बाँच्ने अनेक विकल्प रोज्दै ज्यालादारी गर्ने मजदूर | Citizen Post News
कोरोना कहरः बाँच्ने अनेक विकल्प रोज्दै ज्यालादारी गर्ने मजदूर
२०७७ साउन २ गते ०८:३०
काठमाडौं । 'लकडाउन' को बेला मकै किन्न आउनेहरु कोही भएनन होला, कसरी गुजारा चलाउनुभो त आमा ? प्रश्न भुँइमा खस्न नभ्याउँदै ति आमैले सूस्केरा हाल्दै भनिन्,'लकडाउनले कति हन्डर दिएको छ, त्यो त मलाई मात्र थाहा छ । भनेर पो के गर्नु ? हामीलाई कसले पो सहायता गर्छ र ?'
पुरानो नैकापको एक गल्लीको छेउमा धुँवा पुत्ताउँदै आगोमा मकै सेकिरहेकी सीता कटुवालले भनिन् बिहान खायो बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्था थियो, यो गरे होला कि त्यो गरे होला कि भन्यो यसो उसो गर्यो हातमुख जोड्न पनि मुस्किल ।
कोरोना रोकथामको लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसंगै उनको जीवनमा २ जना बच्चासहित ४ जना परिवारको पेट कसरी भर्ने चिन्ताले सताउन थाल्यो । लकडाउन हुनुअघि ज्यामी काम गरेर परिवार पाल्दै र बच्चा पढाउँदै आएकी सीतालाई ज्यामी काममा जान नपाएपछि घरको चुलो निभ्न थाल्यो । घरको चुलो सघैं निभ्न त दिन भएन ।
बरु सडकको गल्लीमा चूलो बालेमा घरमा पनि बाल्न सकिन्छ कि ? उनको मनमा नयाँ कामको लहड चल्यो ।
एक दिन बिहानै आफूसंग बचेको जम्मा ५ सय लिएर हरिया मकैको खोजिमा निस्कीन् । दिनभर सडकको एक छेउमा मकै पोलेर साँझसम्म ७ सयको व्यापार गरिन् । साम कटाएर २ सय नाफा निस्कीयो । उनले भनिन्, 'दिनदिनै यसरी नै कहिले मकै पोल्ने कहिले तरकारी बेच्ने गरें भने त जेनतेन गुजारा चल्ला नि भन्ने लागेको छ ।'
'यस्तो कामले कमाइ हुँदा त खाइएला नभए के गर्ने ? बरु कुनै कार्यालय वा घरमा केही पाए गर्न हुन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'के सरकरले हामीजस्तो गरिखाने मेलो गुमाएकालाई काम दिन्छ र ?'
उनमा आशा जाग्यो-'लौन नानी ! केही काम भए मिलाइदिनु यसरी त कति दिन चल्छ र अव पहिले जस्तै ज्यामी काम पाइदैन पाइहाले पनि काम अनुसारको तलव दिंदैनन्, कसरी बच्चा पढाउने ?'
ओखलढुंगाबाट १५ वर्षअघि काठमाडौं आएर ज्यामी काम गर्दै आएकी सीता अव भने उमेरले पनि सो काम गर्न नसक्ने वताउँछिन् । भन्छिन् अव भदौमा ५७ वर्ष पुग्छु, धुँडा दुख्ने बिमार छ, भारी बोन्न गाह्रो हुन थाल्यो, बुढोले पनि केही काम गर्दैनन् । बच्चा त पढाउनै पर्यो, बरु भाँडा माझ्ने लुगाधुने काम पाए नि गर्न हुन्थ्यो ।
लकडाउनले मकवानपुरकी माया लामालाई पनि उस्तै चहर्याउने घाउ दिएको छ । उनले १२ वर्षदखि गर्दै आएको ज्यामी काम रोकियो । ज्यामी काम नपाएपछि ठेलामा तरकारी लिएर बिहान बेलुकी सडकका गल्लीमा ग्राहक कुर्न थालिन् ।
'लकडाउनपछि न काम पाइयो न त काम गरेको बेलाको ज्याला पाइयो,' उनले भनिन् ।
लकडाउन भयो भनर घरभित्रै बसेर खान पुगेन् । अनी छिमेकीसंग एक हजार सापट मागेर कलंकी, खड्का गाउँका विभिन्न तरकारी फर्मबाट तरकारी किनिन् र डोकोमा बोकेर घरघरै चाहार्न थालिन । पहिलो दिन बसेको नाफाले २ दिनको लागि खाना जुगाड गरिन् ।
अव त उनको मन आफूले संकटको बेला शुरु गरेको तरकारी व्यापारमै बसेको छ । २ छोरामध्ये १२ वर्षको ठूलो छोरा पनि आमासंगै बसेर तरकारी किन्ने ग्राहक बोलाउन व्यस्त छ । अव ज्यामी काम छोडेर कुखुरा पाल्ने, तरकारी खेती गर्ने तयारी गरिरहेको उनले वताइन् ।
उनले भन्छिन्, 'हामी जस्ता ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरलाई मालिकहरुले कहिल्यै काम अनुसारको ज्याला दिएनन्, अव त त्यो काम गर्ने मन पनि छैन ।' लकडाउनले काम नपाएपनि हार नमानी आफ्नै बलबुतामा नयाँ काम थालेकी माया भन्छिन्, 'लकडाउनले काम मात्रै रोकिएको हो र काम गर्दाको पैसा पनि फसेको छ, त्यो पैसा उठाउन पाए हुन्थ्यो ।'
उनले र उनका श्रीमानले ज्यामी काम गरी एक वर्ष लगाएर राजनीतिमा लागेका एक जनाको घर बनाइदिए तर ज्याला दिने बेलामा कचकच गरे । तोकेजती ज्याला दिएनन् । डेढ लाख ज्याला दिनुपर्ने थियो, ५० हजार दिन्न भनेर टारेका छन् । घर मालिकको व्यवहारले उनलाई सो कामप्रति वितृष्णा जागेको छ ।
काठमाडौंमा घर बनाएका ३ जना घरधनीले ज्यामी काम लगाएर तोके अनुसारको ज्याला नदिएको उनले वताइन ।
'आफूसंग खाने चामल छैन, घरघनीले ज्यालादारीको ५० हजार अझै दिएको छैन, यस्तो श्रम शोषण गर्ने क्षेत्रमा अव के आशाले फर्कने ?' उनले प्रश्न गरिन् । माया र सीता जस्तै हजारौं श्रमिकहरु अहिले कामविहीन भएका छन् ।
अझै कतिले त काम गरेको ज्याला समेत पाउन नसक्दा परिवार पाल्ने पीडाले रन्थनिएका छन् । श्रमिककै पसिनामा काठमाडौंमा आलिसान महल ठड्याउनेहरु भने मजदूरका पीडामा मलम बन्न सकेका छैनन् । उल्टै मजदूरले चलाइदिएको व्यवसाय खस्केको बहाना बनाई श्रमिकको श्रममाथि राजनीति गरिरहेका छन् ।
मजदूरसंग भावना होइन भ्रम बाँडिन्छः
लकडाउन भएपछि रोजगारी गुमाएका श्रमिकको पुर्नवहालीको व्यवस्था मिलाउन र आर्थिक संकट पर्न नदिने आश्वाशन दिए । श्रमिकलाई काम नगरेका वेला पनि तलव दिनुपर्छ भन्दै सरकारबाट विभिन्न छुट तथा राहत पनि लिए । तर, श्रमिकले भने न त काम गरेको बेलाको तलव पाए न त रोजागारीमा पुर्नबहालीको वचन ।
मजदूरका हकहितका लागि भन्दै हरेक वर्ष विश्वभर मजदूर दिवस मनाइन्छ । मजदुरकै भरमा करोडपति हुनेहरुले यस दिन मजुदूरका लागि यस्तो र उस्तो गछौं भनेर मज्जैले आश्वासन दिन्छन तर त्यो आश्वासन उनीहरुकहाँ नपुग्दै हावामै विलिन हुन्छ ।
मजदूरका मालिक बनेकाहरू तिनै मजदुरलाई भर्याङ बनाएर शासकमा रूपान्तरित भएका छन् ।
तर, आम मजदूरको स्थिति भने उस्ताको उस्तै छ । अहिले नेपालमा मात्र होइन विश्वकै श्रम बजारमा शारीरिक श्रम गर्ने र मानसिक श्रम गर्नेबीच ठूलो खाडल छ । जवसम्म यस्तो खाडल रहिरहन्छ मजदुरहरु अनेकौं पीडामा रन्थनिइरहनु पर्छ ।
धनी गरिवबिच बढ्दो खाडलः
१९ औं शताब्दीको मध्यबाट युरोपमा उर्लिएको मजदूर आन्दोलनले धनी र गरीबबीच असमानता अन्त्य गर्न मजदूरको शासन हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो । तर, सो मान्यता धेरै समय टिक्न सकेन । असमानता अहिले पनि उस्तै छ ।
गरिबी र असमानताविरूद्ध काम गर्दै आएको संस्था ‘अक्सफाम इन्टरनेशनलको २०७६ मा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार संसारका दुई हजार १५३ जना खर्बपतिहरूसँग संसारका बाँकी ६० प्रतिशत (चार अर्ब ६० करोड) मानिससँग भएको जम्मा सम्पत्ति भन्दा बढी सम्पत्ति छ ।
विश्वव्यापी असमानता पछिल्लो दशकमा अझै बढेको र खर्बपतिहरूको संख्या दोब्बर भएको सो प्रतिवेदनले औल्याएको छ । यसरी धनी र गरिवबिचको खाडल बढ्दै जाँदा र मालिकले मजदुरलाई शोषण गरिरहँदा गरिवी र बेरोजगारीको दुष्चक्र मौलाइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तयार पारेको प्रतिवेदन ‘वर्ल्ड इम्प्लोयमेन्ट एन्ड सोसियल आउटलुकः ट्रेन्ड्स २०२०’ अनुसार संसारभर ४७ करोड मानिस बेरोजगार वा अर्धरोजगार छन् ।
१८ करोड ८० लाख मानिस बेरोजगार भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदव अनुसार १६ करोड ५० लाखले कामअनुसारको ज्याला पाएका छैनन् र १२ करोड मानिससँग श्रम बजारसम्मको पहुँच नै छैन् ।
तथ्याकं अनुसार विश्वभर रहेको श्रम शक्तिको १३ प्रतिशत जनसंख्यया बेरोजगारीबाट पीडित छ । समग्रमा ४७ करोड मानिस बेरोजगारीका कुनै न कुनै पक्षबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । पछिल्लो ९ वर्षमा विश्वव्यापी बेरोजगारी तुलनात्मक रूपमा स्थिर थियो ।
सो बेला विश्व आर्थिक वृद्धिदर घट्दै गइरहेको र श्रम शक्ति बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सन् २०२० मा २५ लाख थप मानिस बेरोजगार हुने अनुमान गरिएको छ ।
कोरोना महामारीले ल्याएको बेरोजगारीः
कोरोना महामारी देखिएपछि बेरोजगारी अझै बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को अध्ययनले वताएको छ । आइएलओले वैशाखमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले कोभिड १९ का कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने एक अर्ब ६० करोड मजदूरको रोजगारी खोसिएको देखाएको छ ।
कोभिड १९ का कारण सबैभन्दा जोखिममा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर परेका छन् । यस महामारीकै कारण अहिलेसम्म अनौपचारिक क्षेत्रका ६० प्रतिशत मजदूरले रोजगार गुमाएका छन् । आइएलओ यसअघि सन् २०२० मा आंकलन गरेको भन्दा पनि तिव्र गतिमा रोजगारी घट्ने जनाएको छ ।
यसरी बेरोजगार भएकामा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका नेपाली मजदूर पनि परेका छन् ।
दिनहुँ कमाएर आफ्नो ज्यालाबाट गुजारा चलाउने वर्गको आम्दानीको दिगोपन हुँदैन । उनीहरू आश्रित कम्पनी वा व्यवसायमा अप्ठ्यारोमा पर्दा कामका आधारमा तलब खाने वर्गको आम्दानी रोकिन्छ । अर्थात आफ्ना रोजगारदाताले पाएको हानीमा उनीहरु पनि भागिदार बनिदिनुपर्छ ।
तर , बहुसंख्यक व्यवसायी र रोजगारदाताको व्यवसाय धानिदिएका वर्ग समस्यामा पर्दा तिनै उद्योगी व्यासायी मौन छन् । मजदूरहरु निर्वल हुने वित्तिकै रोजगारदाता तथा उद्योगधन्दा पनि धरासायी बन्ने खतरा वढ्छ । बन्दाबन्दीको कारण अति विपन्न वर्गको गरिखाने मेलो लथालिंग भएको छ ।
जसको कारण उनीहरु पुन गरिवीको भूमरीमा धकेलिंदै छन् ।
लकडाउनका कारण कमाइ खाने अवसर नपाएका वर्गको आर्थिक स्थिति उकास्न तथा थप संकट आउन नदिन सरकार तथा स्थानिय निकाय तथा रोजगारदाताले आय आर्जनका नयाँ कार्यक्रम तथा योजना तत्काल थालनी गर्नैपर्छ ।
रोजगारी गुमाएका र गुजाराको लागि विकल्प खोज्दै गरेका श्रमिक वर्गको जीवनस्तर खस्कन नदिन सरकाले तत्काल आर्थिक उपार्जनका व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसको लागि नेपालको कृषि उत्पादन, नेपालमा खाद्यवस्तुको उपलब्धता र सोको पूर्तिको लागि उत्पादन र वितरण प्रणालीको विश्लेषण गरी कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै मुलुकमा गरिवीको दुष्चक्र फैलिन नदिन लकडाउनबाट प्रभावित सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्नेगरी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।
कोरोना महामारीले निम्त्याएको गरिवीसंग लड्न सरकारले गरेका सहायताका प्रयासले सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने खाँचो छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने तर्फ स्थानीय निकाय उत्तरदायी हुनु आवस्यक छ ।
रोजगारी गर्न चाहनेलाई पुन काममै फर्काउन र आफ्नै सिप मार्फत सानोतिनो उद्यम गर्न लाई स्वरोजगारका कार्यक्रम तथा आर्थिक अनुदानको व्यवस्था गरेमा श्रमिकको घाउमा मलम लाग्ने थियो ।
(यो रिपोर्ट फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)